Erdogan oo jeediyey hadal guux badan abuuray
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa hadal lama filaan ah oo kasoo yeeray ku sheegay in Turkey ay u baahan tahay inay yeelato dastuur cusub, taasi oo abuurtay guux badan oo ku saabsan inuu doonayo inuu xukunka sii dheereysto.
“Way caddahay in isha dhibaatooyinka Turkey ay tahay in dastuurka ay qoreen kuwii dowladda afgambiyey,” ayuu yiri Erdogan.
“Waxaa la joogaa waqtigii dib loo furi lahaa doodda dastuur cusub. Haddii aan isku fahanno xisbiga talada nala wadaaga, tallaabo ayaan mustaqbalka ka qaadi karnaa dastuurka,” ayuu yiri.
Xisbiga AKP ee Erdogan ayaa waxay xulufo yihiin xisbiga MHP.
Hadalka madaxweynaha ayaa dadka qaar u fasirteen inuu doonaya inuu meesha ka saaro muddo xileedka madaxweynaha ee ku kooban labada goor, si uu mar saddexaad u ordo haddii uu kusoo baxo doorashada 2023.